01:52 - 06 Apr
25 Feb 2020 - Muqdisho – Sharciga doorashada federaalka Soomaaliya ayaa hadda lagu ansixiyay Golaha Shacabka waxaana saxiixay Madaxweynaha 20-kii Febraayo. Sharcigan wuxuu qeyb ka yahay hab-shaqo sharciyeedka doorasho ee asaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah qabsoomidda doorashooyin qaran oo u suurto-gelinaya in tirada ugu badan ee muwaadiniin ah ay codeeyaan.
Hadal-Qoraalka Af-hayeenka Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee ku aaddan Soomaaliya
29 Dec 2019 - Xog-hayaha Guud ayaa si adag u cambaareeyay weerarkii argagixiso ee 28kii Disembar 2019 ka dhacay magaalada Muqdisho. Wuxuu tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoysaska dadkii dhibaatadu kasoo gaartay, wuxuuna dadka dhaawaca ah u rajeeyay soo kabasho dhakhso leh. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in dembiilayaasha ka dambeeyay falkan argagaxa leh la horkeeno cadaaladda.
Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD iyo Qaramada Midoobay ayaa [Kulamo] Wadatashi ah ku Yeeshay Garowe
18 Dec 2019 - Garowe – Wakiilo kala matalayay Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Gobaleedka IGAD, iyo Qaramada Midoobay ayaa maanta booqasho ku tegay Puntland, waana kulankii afaraad ee kamid ah kulamo wadatashi ah oo taxane ah oo ka kala dahacayay Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah.
17 Dec 2019 - Kismayo – Wakiilo ka socday Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Gobaleedka IGAD, iyo Qaramada Midoobay ayaa maanta booqasho ku tegay Jubaland, waana kulankii saddexaad ee kamid ah kulamo wadatashi ah oo taxane ah oo ka kala dahacayay Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah.
13 Dec 2019 - Muqdisho - Saaxiibada caalamka ee Soomaaliya* waxay soo dhaweynayaan hadal qoraaleedyadii ay soo saareen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca (ASWJ) 12kii Disembar. Waxaan qaddarinaynaa dadaallada hagar la’aanta ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, hogaanka ASWJ iyo saamilayda kale ee hawshu khusayso ay ku bixinayaan sidii qodobbada la isku hayo loogu xallin lahaa wadahadal iyo isu-tanaasul.
Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD iyo Qaramada Midoobay ayaa [Kulamo] Wada-Tashi ah ku Qabtay Jowhar
11 Dec 2019 - Jowhar – Wakiilada ka socday Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Gobaleedka IGAD iyo Qaramada Midoobay waxaa farxad u ah inay maanta booqasho ku yimaadaan Dowlad Goboleedka HirShabelle, waana kulankii labaad ee kamid ah kulamo wadatashi ah oo taxane ah oo ka kala dahacaya Dowlad Goboleedyada.
Munaasabadda Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka awgeed, ayaa ergeyga QM wuxuu ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay sii amba-qaadaan horumarka
10 Dec 2019 - WAR-SAXAAFADEED 28/2019 Muqdisho – Munaasabadda Maalinta Xuquuqul Insaanka awgeed, ayaa ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya wuxuu maanta ugu baaqay dhalinyarada dalka inay sii amba-qaadaan horumarka la gaaray ilaa iyo hadda ee lagu dhowrayo xuquuqul insaanka oo bulshadooda u ah asaas muhiim ah.
09 Dec 2019 - WAR-SAXAAFADEED 27/2019 Muqdisho – Iyadoo la xusayo Maalinta Caalamiga ah ee La-dagaallanka Musuq-maasuqa, ayaa ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya wuxuu maanta soo dhoweeyay horumarka dalku uu ka gaaray xoojinta sarreynta sharciga iyo dhisidda hay’ado daah-furan oo lala xisaabtami karo, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in lasii wado ka shaqaynta hawlahaas.
25 Nov 2019 - WAR-SAXAAFADEED 26/2019 Muqdisho – Billowga ololaha sanadlaha ah ee caalamiga ah ee soconaya 16ka maalmood ee looga soo horjeedo xadgudubka ku saleysan dhedig-labka iyo jinsiga, ayaa Qaramada Midoobay waxay maanta muujisay muhiimada uu leeyahay horumar laga gaaro arrimahaas.
16 Nov 2019 - Muqdisho – Saaxiibada Soomaaliya ee Beesha Caalamka ee hoos ku xusan* ayaa soo dhoweeyay qodobada ay ku heshiiyeen Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed, iyo Madaxweynaha Kenya, Mudane Uhuru Kenyatta, kadib shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi 14kii Nofembar, arrintaas oo ah tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal.